नर्सिङ्ग केयर वर्करको जीवन (लाईफ स्टाईल) | Japan Care Worker Guide
नर्सिङ्ग केयर वर्करको रुपमा जापानमा काम गर्नु हुन्छ भने कस्तो प्रकारले एकदिन बिताउनु हुन्छ, कस्तो प्रकारको काम गर्न पर्छ होला ? नर्सिङ्ग केयर क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका ब्यक्तिहरुसंग नर्सिङ्ग केयर वर्करको दैनिक जीवनका सन्दर्भमा अन्तर्वाता लिएका छौं । नर्सिङ्ग केयर सेन्टरका सेवाहरु २४औं घण्टा उपलब्ध हुन सक्ने भएकोले कामको प्रकारको आधारमा रातीको काम पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ । काममा जतिनै ब्यस्त भएता पनि सबै जनाले नर्सिङ्ग केयर र जापानी भाषाको अध्ययन राम्रोसंग गरिरहेको देखिन्छ ।
धेरैजसो नर्सिङ्ग केयर वर्करहरु बिहान साढें ८ बजेतिर काम शुरु गर्दछन र साँझको सांढे ५ बजे काम सिध्याउने गर्दछन । काम गर्ने ठाँउ अनुसार बिहान सबेरै देखि अथवा राती अबेरसम्म जस्ता काम गर्ने सिफ्टहरु हुने गर्दछन । नर्सिङ्ग केयर होममा काम गर्ने केयर वर्करको एकदिनको तालिकामा एक नजर राखौं ।
J (फिलिपिन्स) को एक दिन (दिउँसोको काम)
८:५० टिम नोट पुष्टिकरण, बिहानको सभा, पठाउने
९:१५ डायपर बदल्ने、उठ्नु नर्सिंग हेरचाह
१०:०० हाइड्रेसन, मनोरन्जन
११:०० खाजाको तयारी, चार्ट भर्ने,
११:४५ सेवा दिने, खानाको नर्सिङ्ग केयर
१२:०० ब्रेक (खाजा ब्रेक)
१३:०० मुखगुहा र शौचालय मार्गदर्शनको पुष्टिकरण
१४:०० ओछ्यानबाट उठाउने, डायपरहरू परिवर्तन गरिदिने
१:०० स्न्याक्सको तयारी, खानाको नर्सिङ्ग केयर,　शौचालयहरूको लागि मार्गदर्शन
१६:०० चार्ट भर्ने, रातिको खानाको तयारी, डायपरहरू परिवर्तन गरिदिने
१७:२० कामको अन्त्य
२२:०० सुत्ने तयारी
C (भियतनाम) को एकदिन (डेसर्भिस) :
८:०० घरबाट प्रस्थान, बसद्वारा जाने
८:३०　बिहानको सभा, प्रयोगकर्ताहरूको घरमा लिन जाने
९:३० रक्तचाप शरीरको तापक्रम मापन, बाथटबमा नुहाउने नर्सिङ केयर
१३:०० घर फर्कने प्रयोग कर्ताका लागि तयारी
१५:०० हल्का खाजा
१५:३० शौचालय मार्गदर्शन, सहयोग, प्रयोगकर्ताहरुलाई घरमा पठाउने
१६:३० सफा गर्ने, रेकर्ड राख्ने
१७:३० कामको अन्त्य
१८:०० घर फर्कने तयारी
बिहान काममा आउँदा मैले गर्ने पहिलो काम भनेको रेकर्डहरू पढ्नु हो । पहिलो दिन र रातीको समयका प्रयोग कर्ताको अवस्था बुझ्ने र कुनै परिवर्तन छ वा छैन जाँच गरी दिनको शुरूवात हुन्छ । जापानको ह्योगो प्रान्तको नर्सिङ्ग केयर होममा काम गर्ने भियतनामकी Ms. HOANG THI NGOC ANH ले, बिहान र दिउँसोको समयमा सबै भन्दा बढी समय लाग्ने कामको सन्दर्भमा जानकारी दिनु भयो ।
“बिहान सबभन्दा समय लाग्ने काम दिसापिसाबको नर्सिङ केयर हो ।　त्यसै गरी शौचालय मार्गदर्शन र डायपर परिवर्तन　गर्ने हो। दिउँसो सबभन्दा समय लाग्ने काम बाथटबमा नुहाउने नर्सिङ केयर हो । लगभग १ घण्टा देखि ४ घण्टासम्म समय
लाग्छ ।”　त्यसै गरी, प्रवेश प्रकारको（Entrance type） सुविधा सेन्टरमा २४ घण्टानै सेवा प्रदान गरिने भएकोले, रातीमा पनि काम गर्न पर्ने हुन्छ । थोरै स्टाफहरुले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न पर्ने हुन्छ ।
C (फिलिपिन्स) को एकदिन (रातीको काम) :
१६:१५ काम सुरु गर्ने, पठाउने
१७:१५ बेलुकाको खाना तयार गर्ने
१७:४५ खानाको नर्सिङ्ग केयर, सरसफाइ, शौचालय मार्गदर्शन
१९:२० ब्रेक (डिनर)
२०:०० सुत्नु नर्सिंग केयर, डायपरहरू परिवर्तन
२०:३० नाईट शिफ्ट कार्य (रेकर्डहरू भर्ने आदि)
२३:०० तलामा कुर्ने (नर्स कलहरू, आदि)　का लागि
१:३० डायपरहरू परिवर्तन
३:०० पेट्रोलिङ्ग गर्ने, डायपर परिवर्तन　गर्ने
५:०० बिहानको खाना, उठ्ने नर्सिङ्ग केयर
७:३० सेवा प्रदान, खानाको नर्सिङ्ग केयर、शौचालय मार्गदर्शन
९:२० कामको अन्त्य
रमाईलो काम के हो ?
इन्डोनेसियाकी Ms.Riswanti ले रमाईलो कार्यको सन्दर्भमा यस्तो भन्नुहुन्छ । “मैले सँगै गीत गाउँदा(धेरै राम्रो छ) भनेर प्रशंसा हुने गर्दछ । साथै, रुची भएको विषयमा कुराकानी गर्दा एकदमै रमाईलोसंग समय बित्छ । उदाहरणको लागि बिराला मन पराउने प्रयोगकर्तासंग बिरालोको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने, गीत मनपराउने प्रयोगकर्तासंग गीत सिक्ने र संगै गाउने गर्दा अतीनै रमाईलो हुन्छ। ”
ओकायामा प्रान्तको नर्सिङ्ग होममा काम गर्ने Mr.Albert Fernandez ले वृद्धवृद्धाहरुसंग कसरी रमाईलोसंग काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो बिचार (आइडिया) सुनाउनु भयो । “वृद्धवृद्धासंग रमाईलोसंग कुराकानी गर्नका लागि ३ वटा शिर्षक छन, १- मौसम, २- खानेकुरा, ३- सुत्दाखेरीको अवस्था । यि तिनप्रकारका शिर्षकबाट रमाईलोसंग काम अगाडी बढाउन सक्नु हुन्छ । साथसाथै प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य अवस्था पनि बुझ्न सकिन्छ ।”
सबै जनाले रमाईलोसंग काम गर्नका लागि कम्युनिकेसन कलामा धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ ।
गाह्रो काम के हो ?
ब्यक्ति अनुसार गाह्रो कामका प्रकार फरक हुन सक्दछन । तर “बाथटबमा नुहाउने नर्सिङ केयर र “एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने नर्सिङ केयर” सबै भन्दा गाह्रो काम भनेर सुन्ने गरिन्छ । बाथटबमा नुहाउने नर्सिङ केयरको बेलामा लड्ने संभावना हुने भएकोले एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्दछ । त्यसै गरी आफै उठ्न नसक्ने प्रयोगकर्तालाइ बेडबाट व्हीलचेयरमा सार्नुपर्नेहुँदा समय लाग्नुका साथै बल पनि आवस्यक पर्दछ ।
त्यसै गरी आफु एक्लैले गर्न सक्ने हुनका लागि धेरै समय लाग्ने कामहरुमा “लिडरको काम” “रातीको काम” “बाथटबमा नुहाउने नर्सिङ केयर” इत्यादी भनेको सुनिन्छ । यद्दपी अनुशासित र गंभिरतापूर्वक कामहरु सिकेमा “३ महिना पछि रातीको काम एक्लै गर्न सक्ने” ब्यक्तिहरु पनि छन । केही व्यक्ति भन्छन्, “मैले प्रशिक्षणमा शारीरिक मेकानिकीहरू（Body mechanics）सिकेर यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने नर्सिङ केयर र स्थानन्तरणको लागि केयर गर्न प्रयोग गरे।”
सबै जनाले अध्ययन र योजना बनाउँदै गाह्रो काम गरिरहेको देखिन्छ ।
नर्सिङ्ग केयर योगयता र जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने समय हुन्छ ?
जापानमा केयर वर्करका रुपमा काम गर्ने विदेशी नागरिकहरु कामको साथसाथै नर्सिङ्ग केयर योगयता प्राप्त गर्न र जापानी भाषाको स्तर वृद्धी गर्नका लागि दिनँहु धेरै मेहनत गरिरहेका छन ।” नर्सिङ्ग केयर योगयताको परीक्षा पास गर्न दिनँहु अध्ययन गर्ने गर्दथे । थोरैमा दिनको २ घण्टा अध्ययनका लागि समय दिने गर्दथे।” भियतनामकी Ms. HOANG THI NGOC ANHले सुनाउनु भयो ।
त्यसै गरी काम गर्ने ठाउँ अनुसार विभिन्न किसिमका प्रशिक्षणहरु दिइने गरिन्छ । फिलिपिन्सका Mr.Albert Fernandez काम गर्ने ओकायामा प्रान्तको नर्सिङ्ग होममा “हप्ताको एक-एकपटक नर्सिङ्ग केयरको प्रशिक्षकसंग नर्सिङ्ग केयरको अध्ययन र जापानी भाषाको प्रशिक्षकसंग जापानी भाषाको अध्ययन” हुने गर्दथ्यो ।
पाठ्य पुस्तकहरूमा जापानी भाषा पढ्नुको अतिरिक्त, “मैले जापानी मानिसहरुसँग सक्रिय रुपमा कुरा गरें र चलचित्र र एनिमेसनबाट नयाँ शब्दहरू सिके” “मैले पुस्तकहरुमा जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने गर्थे, टिभी हेर्दथे र गित पनि गाउने गर्दथे । यसबाट जापानी भाषा सम्झने गर्दथे । यदि कुनै खान्जी वा गाह्रो शब्दहरू भएमा ’emलाइ नोट गरेर सम्झने प्रयास गर्ने गर्दथे ।”　भन्ने व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ ।